Hogaamiyihii Al-Qaacida ee Gacanka Carbeed oo howlgal qorsheysan lagu dilay. – Xogsoor News Network
Booliska dalka Norway oo warbaahinta lawadaagay Haweeney isku dhexdagaalay Masaajidka Towfiiq ee Magaalada.
Barakac xoog leh oo ka bilowday Mandhera iyo dagaal kale oo laga cabsi qabo
Dalka Noway oo sheegtay in 32 qof oo u dhashay dalkeeda uu ku dhacay Cudurka Coronavirus
Dowlada somaliya oo shaacisay in duqeyn lagu burburiyey saldhigga Al-Shabaab ee Dujuuma.
Ciidamada Haramcadka Somaliya oo laga dajiyey Magaalooyinka kala ah.
Cabdirashiid Janan oo hadda tagay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo.
Dowlada Kenya oo ka jawaabixisey Eedeyntii uga timid dowlada Soomaaliya
AKHRISO Magacyada Guddiga caleema saarka Madaxweynaha Galmudug oo la Magacaabay.
DEG DEG: Hogaanka Sare ee Kooxda Ahlu Sunna oo safar dibadda ah uga baxay Dhuusamareeb
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Hoggaamiyihii Al-Qaacidda ee Gacanka Carbeed Qasim Al-Raymi lagu dilay howlgal laga fuliyey gudaha dalka Yeman.
Howlgalkaan ayaa waxaa xaqiijiyey Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in ciidankiisa ay dileen hoggaamiyahaas oo xilkaas hayey tan iyo sanadkii 2015.
Labaatankii sano ee lasoo dhaafay, hoggaamiyaha la dilay ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weeraro ka dhan ah danaha dalalka reer Galbeed.
Hoggaamiyihii uu xilka kala wareegay ayaa waxaa horey duqeyn dhanka cirka ah ku dileen ciidamo ka tirsan Dowladda Mareykanka.
Garabka Al-Qaacidda ee Gacanka Carbeed ayaa la sameeyey sanadkii 2009, waxaana loogu talagalay in looga hortago danaha Mareykanka iyo dalalka reer Galbeed ay ka leeyihiin Gobolka.
Garabkaan ayaa si weyn ugu xoogaana dalka Yeman, waxaana fursad weyn siisay xasilooni darrida ka jirto dalkaas, waxaana Yemen howlgal Militari ku qaaday dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo xulafooda inkastoo aan weli wax natiijo ah laga gaarin.
Warka ku saabsan dilka Hoggaamiyahaan ayaa wuxuu soo ifbaxay bartamaha Bishii January ee sanadkaan inkastoo garabka Al-Qaacidda ee Gacan Carbeed ay sheegeen inaan la dilin iyagoo soo bandhigay cod uu hoggaamiyahooda duubay balse u muuqday inuu ahaa mid xilli hore la duubay.
Qoraalka kasoo baxay Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in si rasmi ah loo dilay Qasim Al-Raymi balse laguma xusin waqtiga la dilay.
“Dhimashadiisa waxaa ay sii kala daadineysaa Al-Qaacidada gacanka Carbeed iyo dhaqdhaqaaqa kooxda ee caalamka, waxaana ay inoo suurtagalineysaa in aynu ka takhalusno khatarta ay kooxdaas ku heyso nabadgelyada caalamka,” ayaa lagu yiri qoraalkii kasoo baxay aqalka cad.
Kooxda Al-Shabaab ayaa Magaalada Ceeldheer ee Gobolka Galgaduud ku caleema saartay Suldaan cusub oo ay yeelaneyso Beesha Waceysle ee Abgaal kaasoo kamid ahaa odayaashii taageersanaa kooxdaas. Kulankaan oo ay si weyn usoo diyaarisay kooxda Al-Shabaab isla markaasna ay ka qeyb galeen Odayaasha Dhaqanka, Haweenka, Dhallinyarada iyo Ardayda deegaanka Ceeldheer ayaa […]
Imaaraadka Carabta oo ka laabtay dhismaha saldhigga militari ee.